Mashruuca PCDP Ee Degmada Mustaxiil - Cakaara News
Mashruuca PCDP Ee Degmada Mustaxiil
Mustaxiil( cakaaranews )Jumce 1da April 2016, Masruuca horumarinta xoolodhaqatada ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano PCDP ayaa ah mid ka hawlgala 54 Degmo Oo deegaanka ah. Sidaasdarteed Degmada Mustaxiil Oo kamid ah 54ta degmo ee uu mashruucu kahawlgalo ayaa sanadkan 2008 T.I uu kafuliyay mashaariico kaladuwan.
Hadaba, Iskuduwaha mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada (PCDP) ee degmada mustaxiil mudane Maxamed Abdirashid macalin oo uwaramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in mshruucu sanadkan uu fuliyay Shan mashruc oo kala ah Dugsi- Hoose Dhexe oo laga dhisay qabalaha Qaboobe iyo sidookale kale qabalaha koobane oo laga sameeyay biyo galin islamarkaana ay bulshadu kafaa iidaysato.
Dhanka kale wuxuu iskuduwuhu sheegay in dugsi hoose dhexe lagadhisay qabalaha dundumoqaris, iyo waliba qabalaha furug oo laga dhisay 2bo mashruuc oo kala ah ceel-biyood iyo caafimadka xoolaha.
Ugudanabayna wuxuu masulku tilmaamay in mashaariicahaaas aan korka kusoo sheegnay uu fuliyayay mashruuca PCDP islamarkaana sidii loobaahnaa eesharciga waafaqsanayd loo dhisay maamulkuna degmaduna uu ula-wareega.